Customized pallet rack wire decking industrial pallet racks steel pallet rack - Soo Saarida Qalabka Kaydinta Qalabka Birta ee Xirfadeed,Taleex,Pallet,Raashin,Weelka Roll Etc
Hoyga » Wax soo saar » Qalabka Birta » Customized pallet rack wire decking industrial pallet racks steel pallet rack
Daaweynta dusha sare: budo budo ah
Naqshadeynta la heli karo ,folding,detaching
Qalabka la heli karo Trail,wheels,habaysan
Aagga Codsiga supermarket,kaydinta,industrial,warehouse,transport
Awoodda Loading 1000-2000kg
stacking 1+3 lakabyada
1. S: Aaway warshaddaadu? Sideen ku booqan karaa halkaas?
2. S: Waa maxay alaabta ceyriin ee alaabadaadu?
3. S: Waa maxay muddada lacag bixinta?
4. S: Waa maxay wakhtiga dhalmada?
5. S: Dekeddee ayaa loo isticmaali doonaa sidii deked dejisa?
6, Anigacaadadiiized la heli karo?
7, Miyaad naqshadeyn kartaa oo aad sameyn kartaa sawir ?
8: Waa maxay faa iidadaadu?
1. ) Warranty: —3~ 10 sano damaanad haddii taasi dhacdo
A) Proper handling during operation, si sax ah u maammuul forklift inta lagu xidhayo / xirmayo
C) Environment request –indoor, xaalad qalalan oo aan qoyaan lahayn, ha la xiriirin wax walxo kiimiko ah oo dumaya (loogu talagay zinc steel iyo waxyaabaha budada ka sameysan, xaddidneyn kuleylka kulul ee kulul)